Thola ukuqoqwa kwezicathulo zakwaNaguisa ehlobo | Bezzia
Akukhona okokuqala ukuthi eBezzia sithole ukuqoqwa kwezicathulo kusuka INaguisa, inkampani yaseSpain owazalwa ngo-2012 kusuka enyunyaneni yomklami womkhiqizo uClaudia Pérez Polo kanye nomakhi uPablo Izquierdo López nokuthi namuhla kwethulwe emazweni angaphezu kwama-20.
UNaguisa unomlingani wakhe omkhulu ku-jute. Kepha lokhu akuyona ukuphela kwakhe okuphawulekayo. Empeleni, mhlawumbe ibhalansi phakathi kwama-silhouettes abesifazane kanye nenani elifanele lokuhleleka eqoqweni le-Naguisa okunqobe abaningi bethu.
Izicathulo zakwaNaguisa zenzelwe ukucatshangelwa owesifazane onesibindi, onomdlandla noqinile, ongafuni ukudela ukunethezeka lapho efaka isicathulo sokuqala. Ngakho-ke, eqoqweni layo elisha, u-Origen, i- izingcezu eziphansi noma eziphakathi nendawo; izingcezu ezenzelwe ukujabulela kahle usuku lwethu nosuku.
Izinkinobho Zomsuka, iqoqo elisha lentwasahlobo-ehlobo '21
Imvelaphi kaNaguisa i-jute futhi leli qoqo belifuna ukubuyela kumongo walo ukuze linqobe umbono oyingqayizivele nowezinkondlo wowesifazane waseNaguisa. Uzothola izimbadada eziningi eqoqweni elisha nge i-jute floor nemicu yesikhumba eboshiwe ezinamathele eqakaleni ngebhakede ukuthola induduzo enkulu.
Ama-braids enziwe ngezandla kungenye yezimpawu ezivelele emaqoqweni enkampani yezicathulo zaseSpain. IMaar, imbadada yesithende se-fishnet esithende esiphansi eza ngama-pastel hues amahle, neMarga, iphampu evulekile eboshwe ngesithende ngezinye zezintandokazi zethu phakathi kwemiklamo enalezi zinto.
Ngaphezu kwalokho, iNaguisa ifaka eqoqweni layo ezinye izimbadada eziningi eziyizicaba imiklamo yethu esiqinisekile ukuthi izokwenza uthandane. Kunzima ukungaboni uLava, a imbadada ebambelela ku-instep ngebhande le-elastic kanye nezintambo ze-polyester. Kepha noManto akaqashelwa, imbadada yesitayela senkalankala ehlanganisa isiko nesimanjemanje nalokho ungahlanganisa nezikhindi ze-bermuda, izingubo neziketi kuleli hlobo.
Uyazithanda iziphakamiso zeqoqo elisha lezicathulo zakwaNaguisa? Asithandi kuphela ukwakheka kwabo, kepha futhi ne Iphalethi yombala ekhethiwe ukuzilolonga.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Izicathulo » Thola ukuqoqwa kwezicathulo zakwaNaguisa ehlobo